Ch 17 John – 2azụ
Home / Bible / Oziọma Jọn / Ch 17 John
17:1 Jizọs kwuru ihe ndị a, Ọzọkwa, eweli anya ya n'ebe heaven, o kwuru, sị: "Nna, oge awa ahụ eruwo: nye Ọkpara Gị otuto, nke mere na gị Ọkpara wee nye Gị otuto,
17:2 dị nnọọ ka i nyere ikike n'ebe anụ ahụ niile ya, ka o wee nye ndu ebighi-ebi nye ndị niile na i nyere ya.
17:3 Na nke a bụ ndụ ebighi ebi: ka ha we mara na i, nanị ezi Chineke ahụ, na Jesus Christ, Onye I zitere.
17:4 M ka ị dị ebube n'ụwa. M rụchaa i nyere m ịrụzu.
17:5 Na now Nna, enye m otuto n'ime onwe gị, , bụ ebube m nwere na gị mgbe ụwa na mgbe ahụ.
17:6 M gosipụtara aha gị nye ndị ahụ i nyere m site n'ụwa. Ha bụ nke gị, na ị nyekwara m ha. Ha edebewo okwu gị.
17:7 Ugbu a, ha na-aghọta na ihe niile i nyere m si n'aka gị.
17:8 N'ihi na enyewo m ha okwu i nyere m. Na ha alụrụwo okwu ndia, na ha n'ezie ghọtara na m wee si na i, ha ekwerewokwa na ọ bụ gị zitere m.
17:9 M ekpe ekpere maka ha. Adịghị m ekpe ekpere maka ụwa, ma n'ihi na ndị ahụ i nyere m. N'ihi na ha bụ nke gị.
17:10 Na ihe nile nke bu nkem bu unu nwe, na ihe niile dị gị bụ nke m, na mụ onwe m otuto na nke a.
17:11 Na na abụghị m na ụwa, ndị a bụ ndị dị n'ụwa, na m na-abịakwutekwa gị. Nna kasị nsọ, chebe ha n'aha-Gi, ndị ahụ i nyere m, nke mere na ha nwere ike ịbụ otu, ọbụna dị ka anyị bụ otu.
17:12 Mgbe Mu na ha, M chekwara ha n'aha-Gi. M na-eche nche ndị ahụ i nyere m, ọ dịghịkwa otu onye n'ime ha na-efu, ma e wezụga nwa adiana ke adiana, nke mere na Akwụkwọ Nsọ wee mezuo.
17:13 Na ugbu a, m gị. Ma m na-ekwukwa ihe ndị a n'ụwa, ka ha we nwere njupụta nke m ọṅụ n'ime onwe ha.
17:14 Enyewo m ha okwu gị, na ụwa kpọrọ ha asị. N'ihi na ha abụghị nke ụwa, dị nnọọ ka m, kwa, Abughi nke ụwa.
17:15 M na-adịghị na-ekpe ekpere na ị bupụ ha nke ụwa, ma na ị ga-echebe ha pụọ ​​n'ihe ọjọọ.
17:16 Ha abụghị nke ụwa, dị nnọọ ka m na-adịghị m nke ụwa.
17:17 Doo ha nsọ n'ezi-okwu. Okwu gị bụ eziokwu.
17:18 Dị nnọọ ka i ji ziga m n'ime ụwa, Mu onwem kwa, zigara ha nime uwa.
17:19 Na ọ bụ n'ihi ha ka m edokwa onwe m nsọ, nke mere na ha, kwa, nwere ike doro nsọ n'ezi-okwu.
17:20 Ma adịghị m ekpe ekpere maka ha naanị, kamakwa n'ihi na ndị na site n'okwu ha ga kwere na mu.
17:21 Ka ha niile wee bụrụ otu. Dị nnọọ ka unu, Nna, na-na m, na m na gị, otú a kwa ka ha di kwa nime Ayi: nke mere na ụwa wee kwere na i zitere m.
17:22 Na ebube i nyere m, M nyere ha, nke mere na ha nwere ike ịbụ otu, dị nnọọ ka anyị kwa bụ otu.
17:23 M na ha, na ị nọ na m. Ka ha-zuo okè dị ka otu. Na ike ụwa mara na i ji ziga m nakwa na ị hụrụ ha n'anya, dị nnọọ ka unu na-hụrụ m n'anya.
17:24 Nna, M ga na ebe m, ndị ahụ i nyere m nwekwara ike ịbụ na m, ka ha we hu otutom nke i nyere m. N'ihi na ị hụrụ m n'anya tupu a tọọ ntọala ụwa.
17:25 Nna kasị dị nnọọ, ụwa amaghị gị. Ma amaara m na ị na. Na ndị a nke ọma na i zitere m.
17:26 Na m mere ka a mara aha gị ha, m ga-emekwa ka a mara, nke mere na ịhụnanya na nke i hụrụ m wee dịrị n'ime ha, na ka m wee dịrị n'ime ha. "